Waa tee Kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ee hoggaanka u haysa tartanka loogu jiro saxiixa Sergio Kun Aguero? – Gool FM
(Manchester) 12 Abriil 2021. Sida wararku ay sheegayaan waxaa la sii ogaaday kooxda ka dheesha horyaalka Premier League ee haatan hoggaanka u haysta tartanka loogu jioro saxiixa Sergio Aguero.
Shabakadda laga leeyahay Argentine ee TyC Sports ayaa warinaya in kooxda kubadda cagta Chelsea ay hoggaanka u haysto tartanka loogu jiro saxiixa Weeraryahanka Manchester City ee Sergio Aguero.
Weeraryahanka ayaa ka tagi doona Kooxda Manchester City dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu xor u noqonayaa markaas inuu qiimeeyo dooqyo kale iyo kooxda uu doonayo inuu ku biiro.
Kooxda Chelsea ayaa la warinayey muddooyinkii ugu dambeeyey inay doonayso saxiixa Weeraryahankan muddada dheer ka ciyaarayey horyaalka Premier League, wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in Blues ay haatan hoggaanka u haysto tartanka loogu jiro saxiixiisa.
Tababare Pep Guardiola ayaa sidoo kale ogolaansho u siiyay 32-sano jir inuu ku biiro mid ka mid ah kooxaha ay xafiiltammaan Man City, wuxuuna haatan u dhaqaaqi karaa kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Chelsea.